Nagu saabsan - Hebei Gimarpol Makiinado Teknolojiyadeed Co., Ltd.
Hebei Gimarpol Mashiinka Teknolojiyada Co., Ltd.
Xalkaaga hal joogsi ee mashiinada macdanta.
Hebei Gimarpol Makiinado Technology Co., Ltd waxa uu ku yaalaa magaalada Shijiazhuang, gobolka Hebei. Gimarpol wuxuu ku takhasusay soo saarista iyo dhoofinta qalabka macdanta. Kala duwanaanshaheena ugu muhiimsan waxaa ka mid ah, qashin qodista, qoditaanka qoditaanka iyo ul qodista. Sida usheeda duubka, usha dunta, jeex jeex iyo badhanka badhanka iyo aaladaha kale ee qodista macdanta.
Gimarpol waxay qadarinaysaa fursad kasta oo suurtagal ah waxayna u aragtaa qanacsanaanta macaamil kasta inuu yahay hadafkeenna. Waxaan haysanaa oo had iyo jeer ku dhegnaan doonnaa aaminaadeena asalka ah si aan u siino dhammaan macaamiisha adeegga ugu fiican waxaanna ku guuleysanay wadarta qanacsanaanta macaamilka qiimaha tartanka, xakamaynta wax soo saarka ka sarreeya, hubinta tayada adag iyo bixinta waqtiga.
Iyada oo khibradeena hodanka ah in ka badan toban sano iyo injineero xirfad leh iyo kooxda iibka, waxaan diirada saareynaa bixinta xalal dhameystiran oo ku saabsan macdanta.
Waxaan leenahay koox farsamo oo xoog leh xagga warshadaha, tobanaan sano oo khibrad xirfadeed ah,
heer naqshadeyn heer sare ah, abuurista tayo sare leh oo tayo sare leh qalab wax soo saar.
Hadday tahay iibin ka hor ama ka dib iibka, waxaan ku siin doonnaa adeegga ugu fiican si aan kuu ogeysiinno una adeegsanno alaabteenna si ka dhakhso badan.
Horraantii Abriil, macaamiisha Peruvian ayaa booqday warshaddeena. Ka dib booqashada warshadda, macaamiisha ku qanacsan yihiin qalabka wax soo saarka, alaabta ceeriin iyo habka wax soo saarka horumarsan. Ka dib kormeerka goobta ee tayada wax soo saarka, macaamiisha ayaa si farxad leh ula saxeexday 200,000 amarro tijaabo ah oo nala socda, waxaanan rajaynaynaa inay ilaashadaan iskaashiga muddada dheer ah.
23aad Macdanta Dunida Ruushka ayaa si guul leh loogu soo gabagabeeyay Xarunta Bandhigga Caalamiga ah ee 'Crocus International Exhibition Center' oo ku taal magaalada Moscow bishii Abriil 25, 2019.
Intii lagu gudajiray muddada bandhigga, Hebei SINOBUR Makiinado Teknolojiyadeed Co., Ltd. waxay noqotay diiradda aagga bandhigga. Intii lagu guda jiray muddada bandhigga ee saddexda maalmood ah, waxaan tusnay xirfad-yaqaannimo iyo xirfad-yaqaanno dhammaan martida, taas oo ka dhigaysa qolkeenna buuxa.
Shirkad Lagu Kalsoon Yahay & Daacadnimo
Ma u Baahan Tahay Noocyo Dhan Oo Daloolin Ah?
Dhamaadka Maajo, macaamiisheena ka socota USA si ay u soo booqdaan warshadda, waxay ka barteen xoogga warshaddeenna, waxay ku sameeyeen wadaxaajoodyo goobta ah, waxayna nala saxiixdeen xiriir iskaashi oo muddo dheer ah.
Iyada oo khibradeena hodanka ah in ka badan toban sano iyo injineero xirfad leh iyo kooxda iibka
waxaan diiradda saareynaa sidii aan u siin lahayn xalal dhammaystiran oo ku saabsan macdanta.